‘हो म कुनै माफियाको अन्धभक्त नभई रबिको अन्धभक्त हुँ’ नविना सिलवालकाे मनछुने पत्र – Dainik Pana
नबोलु भन्छु मन मान्दैन, नलेखु भन्छु हात थामिन्दैन।
हजुर को हो काहाको हो केही थाहा छैन। न म हजुरसग फेसबुकमा फ्रेन्ड छु न त हजुरको र मेरो चिनजान नै छ। हजुरको कार्यक्रम “सिधा कुरा जनतासग” हेर्थे कहिलेकाही, हजुरले गरेका थोरै मात्र कामहरु हेरेको थिए राम्रो लाग्थ्यो। जब “सा’लिकराम पु’डासैनी” को मृत्यु भको समाचार हेरे, तब थाहा भयो कि उहाँ पनि हजुरकै सहकर्मी हुनुहुदो रहेछ। त्यसको लगभग 2/3 दिनपछी एक्कासी बेलुका र’विलाई पुलिसले समातेर लगेछ भनेको खबर देखे म झसङ्ग भए किन लगेछ भनेर।
अनि मैले पुराना नया सबै भिडियो हेर्दै जादा थाहा पाए कि सा’लिकराम पु’डासैनी मर्नु अघि हजुरको नाम लिएको रहेछ भनेर। त्यसपछी म बिगत शुक्रबार बाट युटुब तथा हरेक सामाजिक सन्जालमा त्यही बारे खोजी खोजी हेर्न थाले।
सा’लिकराम ले बनाउनुभएको भिडियो करिब 10/15 पटक भन्दा बढी रिपिट गरिगरी हेरिसके। म पनि एउटा कलाकार भएको नाताले हो या त सबैले हो हो भनेको भरमा हो त्यो भिडियो सा’लिकराम को मनोज्ञानले बनाएजस्तै लागेन। जब हजुरलाई समातेर एउटा किड्न्यापिङ तरिकाले लगिएछ अनि जति पनि मैले चितवनको अहिलेको माहोल हेरिराछु शुक्रबार बाट हजुरको बारेमा थाहा पाइरहेको छु, साच्चिकै मेरो परिवारको सदस्य लगे जस्तो फिल भैरहेको छ। हजुरले गरेका काम अनि हजुरलाई नचिनेकी मैले, आज त्यो माहोल अनि प्रत्येक जनमासले बोलेको त्यो शब्दहरुले यो मन धेरै रोएको छ। हजुर त साच्चिकै तीन करोड जनताको मनमुटु हुनुहुदो रहेछ। हिजो राती रमेश प्रसाईं जि को शब्द सुनेर अनि अहिले भर्खरै त्यो माहोलको शब्द सुनेर साच्चिकै कति बेला रोएछु थाहा नै पाइन। दादा हजुर त जनताको मात्र नभएर नेपाल कै ढुकढुकी हुनुहुदो रहेछ।
तीन करोड नेपाली को त्यो आवाज !… दादा भनिन्छ राम्रो मान्छे कै धेरै दुश्मन हुन्छन् भनेर। “हजुरको ब्यक्तिगत जीवन के हो कसो हो त्यो मेरो र हाम्रो चासो को विषय हैन, तर हजुरले हाम्रो लागि केके गर्नु भयो त्यो प्रमुख कुरा हो।” किन मेरो मनले भन्दैछ कि त्यहा हजुर सुरक्षीत हुनुहुन्न भनेर? दादा साच्चिकै आज म धेरै रोए हजुरलाई सम्झेर।
जहाँसम्म लाग्छ हजुर निर्दोष हुनुहुन्छ र निर्दोष नै ठहरियोस्। हजुर मेरो मात्र नभएर तीन करोड नेपालीको मनमुटु हुनुहुन्छ, हाम्रो बिश्वास नतोडियोस्। आफ्नो ख्याल गर्नु चाडै फर्केर आउनु दादा, मलाई लाग्छ हजुर त्यहा बाट निस्केपछी सालिकराम पुडासैनी को हत्या हो या आत्माहत्या र यदि हत्या रहेछ भने त्यो हजुरले नै पत्ता लगाउनु हुनेछ दादा। को हो हजुर थाहा छैन, तर हजुरलाई सम्झेर धेरै रोए दादा एकदम माया लागिराछ। यो सब भन्दा सायद कसैकसैले मलाई रविको अन्धभक्त पनि भन्न सक्छन्। तर म त सानै छु जे देखे जे बुझे त्यो प्रकट गरेकी हु। यदि मेरो मनले हजुरलाई साथ दिदा म अन्धभक्त हुन्छु भने अन्धभक्त नै सहि। गलत बोलेको रहेछु भने सम्पूर्णमा माफी चाहन्छु। धन्यवाद
एमाले कार्यकर्ता भन्छन, रविलाई जबर्जस्ती फसाइयो भने यो सरकारलाई सबैभन्दा पहिले म थुक्छु
मैले आजसम्म कुनै पार्टीको तर्फबाट चार आनाको फाइदा लिएको छैन। कुनै पार्टीको प्रायोजनमा एक कप चिया पनि पिएको छैन । म त परै जाओस् मेरो बाउ, बाजे, बराजुलाई पनि कुनै राजनीतिक पार्टीको धाप र सदाशयता छैन ।यद्यपि म धेरथोर राजनीति बुझ्ने भएपछि कम्युनिस्ट विचारधारामा आस्था राख्छु । अहिले कम्युनिष्ट कै दुई तिहाईको सरकार छ, यो अर्थमा मैले शुभचिन्तन र आस्था राख्ने पार्टीको सरकार भएकोले म समर्थन गर्छु (अन्ध भक्त नबनिकन) ।
सँगसँगै मैले संचारकर्मी रवि लामिछानेलाई जिन्दगीमा एकपटक एउटा भीडको बिचमा देख्नु बाहेक प्रत्यक्ष देखे भेटेको छैन । ऊनीले मेरो कुनै समस्या समाधान गरेका पनि छैनन् , न त एक छाक मासुभात र एक क्वाटर रक्सी खुवाएका छन् । उनी मेरो फेसबुकका साथी सम्म पनि हैनन् ।
तर अहिलेको केसमा रवि लामिछानेलाई जबर्जस्ती फसाइयो भने यो सरकारलाई सबैभन्दा पहिले म थुक्छु …. त्यो पनि एकपटक हैन सय पटक ….अहिले मात्रै हैन आजन्म !!
आत्महत्या जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा आरोपित भएपछि प्रहरीले छानबिन गर्न बोलाउनु ,मुद्दा दायर भए अदालतमा बोलाउनुलाई म सामान्य प्रक्रियाको रूपमा लिन्छु । छानबिन प्रक्रियाको सहयोगको लागि रविलाई १०० पटक प्रहरीले बोलाओस् त्यसमा आपत्ति छैन । १०० पटक अदालतमा उपस्थित गराइयोस् त्यसमा पनि विरोध छैन , यदी निष्पक्ष कानुन प्रयोग हुन्छ भने । तर घटनाक्रम हेर्दा यो एउटा सामान्य आत्महत्या र सामान्य आरोपको रूपमा मात्र लिन सकिँदैन । घटना र त्यसपछि सिर्जित घटनाक्रममै कैंयन कालो बादल मडारिएको देखिन थालेको छ । रविलाई फसाउन राज्यको एउटा प्रमुख संयन्त्र नै पर्दा पछाडिबाट हात धोएर पछि लागेको प्रष्ट देखिन्छ । को को लागेको छ र किन लागेको छ भन्ने त राजनीतिको कखरा बुझ्ने एउटा आम मान्छेले पनि प्रष्टै बुझेको छ । त्यसैले निष्पक्ष अनुसन्धान नहोला र जबर्जस्ती फसाइएला कि भन्ने पीर मात्र हो । किनकि यो न्याय मरेको देश हो । इतिहासका भीमसेन थापा , देव शमशेर र वर्तमानकै एउटी निरीह नाबालिका निर्मला पन्तको कुरा छोडौं ,आफ्नै आँखा अगाडि मदन भण्डारी र राजा विरेन्द्रको परिवाले कुकुर मृत्युवरण गरेको देश हो यो ।
आफ्नो कार्यक्रम मार्फत रविले ज जसको हुर्मत लिएका थिए, ज जसको उठिबास लगाएका थिए, ती दलाल तस्कर र दुई नम्बरीहरु उनको विपक्षमा उभिनु त स्वभाविक नै हो । तर मलाई असाध्यै दु:ख र अचम्म लागेको कुरा चाहिँ के हो भने जुन पार्टीलाई म समर्थन गर्छु (जो निम्न वर्गका जनताको हकहितको लागि लड्ने कम्युनिस्ट हूँ भन्छ ) त्यो पार्टी र राज्यको सचेत वर्गमा गनिने पत्रकार (जो आवाज विहीनहरुको आवाज बन्नुपर्ने हो )को नजरमा नै भुइँ मान्छेका मुद्दा उठाउने रवि कसरी र किन दुश्मन भए ?? अहिले विरोध गर्नेमा यी दुई तत्व नै अगाडि देखिएका छन् ।
भला एउटा आम मान्छे भित्र हुने कैयौं कमजोरी रवि भित्र पनि होलान् । पारिवारिक र वैयक्तिक समस्या रविका पनि होलान् । वैयक्तिक कमजोरीका कारण ऊनी पनि कहिँ कतै चुक्लान् ,बाटो बिराउलान् , तर त्यसले कसैलाई बिगारेको छैन । समग्र राष्ट्रिय हित र स्वार्थको निम्ति ऊनी जस्तो सपूत एक युगमा एक पटक जन्मिन्छ ।राज्यको चौथो अंगको विशेषण भजाउने झोले ,चम्चे ,अवसरवादी पत्रकारको कमि त न यसअघि थियो न पछि नै होला ! तर रवि जस्ता पत्रकार जन्मन अब फेरि अर्को युग कुर्नुपर्छ । उनलाई फसाइयो भने उनकै कारण पछिल्लो समय निडर पत्रकारिता गर्न अपील त्रिपाठी लगायत कैयन युवाहरुले कसरी अगाडि बढ्ने आँट गर्लान् ?
मलाई अझै विश्वास छ तिमीलाई न्याय मिल्छ । अहिलेको सचेत युगमा कसैको कालो ,कपटपूर्ण जालझेलले तिमीलाई बेर्न सक्दैन । कथम कदाचित राज्यको पुरै संयन्त्र नै तिमीलाई सिध्याउने खेलमा तल्लीन छ भने पनि ती दीन हीन जनताको आशीर्वादले तिम्रो साथमा छ ।
विष्णु पन्त वार्ताका लागि विश्वसनीयताको प्रश्न वार्ताको नाममा छलछाम, षड्यन्त्र, धोका र गद्दारी हुनु हुँदैन् । विश्वसनीयता भनेको कुनै पनि संस्थाको पहिचान, नैतिकता र स्पष्टताको प्रतिक हो । गोली हान्नका लागि वार्ता गरौं भन्नु हाँस्यास्पद हुन्छ । नेताहरुलाई झुक्काएर थुन्नका लागि वा समाप्त पार्नका लागि वार्ताको नौटंकी लज्जास्पद हुन्छ । आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि जंगली […]